FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATADA DHIRTA JIRKA JIRKA - DAAWADA DADWEYNAHA
Dhir - Tani waa warshad biennial yar, taas oo xubin ka ah qoyska dallad. Dhaqanku wuxuu leeyahay caleenta cagaaran ama cagaar-cagaaran iyo caleemo laba-cagaar ah. Dhulka dhul-beereedka waxaa loo tixgeliyaa xeebta Mediterranean.
Dhir ayaa la koray oo dhan Europe, marka laga reebo Scandinavia. Waxa kale oo ay ku koraan sariiraha beeralayda Canadian iyo American. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale lagu beeray Aasiya, Siberia iyo xitaa Bariga Fog.
Markaad dooratid farabadan dhir, waxaad soo iibsataa oo kaliya marxaladaha ay leeyihiin astaamaha dabacsan iyo caleemaha cagaaran dhalaalaya. Laga soo bilaabo iibinta cagaarka jilicsan, oo leh calaamado muujinaya caajis, waxaa fiican inaad si degdeg ah isaga bixiso.
Ugu xun ee dhan, haddii laamihii dhoobada ur xun, sida tani waxay muujinaysaa in dhaqanka lagu kaydiyey in ka badan hal maalin, sidaas darteed waxay bilaabeen habka of decomposition firfircoon. Qadarka nafaqooyinka ee noocan oo kale ah ayaa la yareeyey.
Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada ee dhir
Dalagyada caleemaha iyo caleemaha dhoobo waxaa ku jira xaddi aad u fiican oo fiitamiin C ah, borotiinno iyo sonkor, taas oo laga helaa warshadda inta badan qaabka glucose, fructose, sucrose iyo xylose. Dhirta cagaarka leh, cagaarka oo ka badbaadiya cuduro badan, sidoo kale waxaa ku jira carbohydrates, walxaha pectic, flavonoids iyo phytoncids.
Its caruusta iyo dhadhanka wanaagsan u sabab ah joogitaanka saliidaha lagama maarmaanka ah ee caleemaha. Faa'iidada dhirta ayaa sidoo kale lagu sharaxay joogitaanka nicotinic acid, fitamiin E iyo B6 ee ka kooban halabuurka. Warshadani waa ilaahyo loogu talagalay kuwa doonaya in ay hagaajiyaan caafimaadkooda hab nololeed.
Maaddooyinka faa'iidada leh ee dhir u ah jirka bani'aadamka sababtoo ah waxqabadyada bayoolojiga sare. Faa'iidada kale ee muhiimka ah ee dhaqanku waa mid la heli karo wakhti kasta oo sanadka ah, sababtoo ah xataa xitaa kaydinta ku habboon ee mudada dheer ah, ma lumiso hantideeda faa'iido leh.
Ma taqaanaa? Si kastaba ha ahaatee, Giriiggii hore waxay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee isticmaala dhir, si kastaba ha ahaatee, marka hore waxay ku qanacsan yihiin sifooyinka qurxinta ee dhirta waxayna u adeegsadeen xafladaha kala duwan (tusaale ahaan, waxay dhoobi jireen dhirta oo ay ku siiyeen dadka ay jecel yihiin, ama loo siiyay inay ku guulaystaan). Waqti ka dib, dhadhanka dhirta iyo sifooyinka daawooyinka ay qadariyaan Roomaanka qadiimiga ah. Tani waxay ka dhigtay mid muhiim u ah uruurinta dhir kasta ama fitravitch kasta.
Bannaanka u badan oo si sax ah u ogaado waxa dhirku u fiican yahay jirka bani'aadamka, sidaas darteed waxay u isticmaalaan si loogu daaweeyo nafaqada vitamin, dhiig yaraan, iyo xitaa kororka lafaha oo kordhay.
Warshadan karkarani waa mid qarsoon, oo laga yaabo inay jirto quwad, zinc, birta, fosfooraska iyo magnesium.
Dhirta waxaa ku jira kiimikooyinka sida apiin, diosmin, petroselinic acid, glycerides, glucosides, nambineyn, luteolin iyo apigenin.
Sidee ayuu dhir u yahay?
Qeyb kasta oo dhir ah, haddii uu yahay qudaar, caleemo ama caws, wuxuu leeyahay awood awood leh oo bogsoon leh. Si kastaba ha noqotee, si aad u gaarto saameynta ugu sareysa, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid wixii cudur ah ee aad u baahan tahay inaad isticmaasho mid kasta. Aynu eegno sida dhirku u yahay mid faa'iido leh, taas oo kiisaska caleemaha loo isticmaalo, iyo xaaladaha xajmiga loo isticmaalo.
Waa muhiim! Isticmaalka dhirku wuxu kaa caawinayaa yareynta xanuunka arthritis, maxaa yeelay caleemooyinkeeda waxay ka kooban tahay saliida muhiimka ah - eugenol, kaas oo leh anti-bararka, dib u bilaabista iyo ficil-celinta anti-edema.
Dhirta ayaa si gaar ah faa'iido u leh caloosha: waxay hagaajinaysaa shaqaynta xubnaha unugyada caloosha iyo mindhicirka, oo ay u dhaqmaan sidii antibid, oo yareynaya kiimikada qanjidhada caloosha.
Intaa waxaa dheer, dhir waxaa lagu gartaa faa'iidooyin gaar ah oo loogu talagalay haweenka, taas oo ah saameyn dib-u-nooleyn iyo dib-u-soo-ceshadayn. Sababtan darted, dhirta waxaa badanaa loo isticmaalaa qeyb ka mid ah maaskarada maqaarka wajiga iyo timaha.
Parsley sidoo kale waxay leedahay saameyn xoog leh oo ka hortag ah, kaas oo u ogolaanaya in si guul leh loo isticmaalo cudurrada nidaamka urojaxanka ee haweenka: adnexitis, cystitis ama kaadimareenka.
Warshadu waxay kicisaa nidaamka qanjirada iyo beeryarada, taas oo ay sabab u tahay isticmaalka isticmaalka diabetes mellitus (isticmaalka habaysan ee decoction dhir wuxuu ka caawiyaa yareynta heerka sonkorta dhiigga).
Caleemaha dhaqankan waxaa ku jira qadar qafiif ah oo calcium ah, taas oo ah ka hortag fiican oo lafdhabarta jinsiga.
Ma taqaanaa? Isticmaalka joogtada ah ee dhir leh ee halabuurka saladhku wuxuu hagaajiyaa dheef-shiid kiimikaadka, wuxuu kiciyaa wax soo saarka unugyada dhiigga cas cas iyo caadiyan heerka heerka dhiigga ee hemoglobin.
Faa'iidada dhirta ee ragga ayaa sidoo kale ka badan cad: waxay leedahay saameyn heer sare ah oo ka hortag ah, kaas oo u oggolaanaya isticmaalka daaweynta prostatitis iyo hagaajinta awoodda.
Faa'iidooyinka cunidda caleemaha dhirta
In daawada dad, caleemaha dhir ayaa muddo dheer loo isticmaali jiray: waxaa loo isticmaalaa inay sameeyaan decoction, tincture iyo tincture. Decoction caleen Geedaha la qaato boronkiitada iyo sida qiyaasta ka hortag ah inta lagu jiro faafa cudurrada fayraska neefsashada. Dhirarka si fiican ayuu u yareeyaa cuncunka qaniinyada cayayaanka waxaana loo arkaa daaweyn aad u fiican oo neefta xun.
Waa muhiim! Haddii aad ka welwelsan tahay su'aasha ah maraqa digaagga ah, ama faa'iidooyinka iyo dhaawaca jidhka, ka dibna jawaabtu way ka sii badan tahay. Decoction dhirta waa daaweyn aad u fiican oo loo yaqaan 'viral' iyo 'bacterial conjunctivitis'. Intaa waxaa dheer, natiijooyinka aadka u fiican waxaa lagu gaarsiiyaa indhaha daboolka geedka ee xanuunka iyo xanuunka indhaha.
Faleebo caleemo Dhirku wuxuu ka caawiyaa inuu si fiican u yareeyo daalka, iyo casiirkoodu wuxuu leeyahay saameynta diaphoretic iyo antipyretic.
Dhirta waxaa sidoo kale loo isticmaalaa kondomoolojiyada, halkaas oo ay ku shaqeyso qaybta ugu muhiimsan ee maskooyinka, kiriimyada, tonics iyo looska. Si kastaba ha noqotee, marka la isticmaalayo karmelka ku salaysan, waxaa lagama maarmaan ah in ay aad u taxadaraan, sida geedka, xaaladaha qaarkood, waxay keeni karaan xasaasiyad xasaasiyadeed, oo muujisa cuncun, finan iyo casaan maqaarka.
Marka arrintan la eego, ka hor inta aanad dalban qalabka qurxinta alaabta guriga leh ee dhir leh, waa in aad marka hore tijaabisaa maqaarka yar oo maqaarka ah kadibna maalinti ka dib marwalba sheyga u rogto wejiga.
Faa'iidooyinka dhirta la qalajiyey
Waxaan horeba uga hadalnay sifooyinka faa'iido leh ee dhirta cusub, laakiin waa suurtogal in la isticmaalo dhirta la qalajiyey iyo sababta ay faa'iido u tahay? Xaqiiqdii, waxay ka timid nuqulkan dabiiciga ah ee dhirta loo diyaariyey, oo leh saameyn dhir leh oo adag.
Sidoo kale, qaadashada joogtada ah ee dib u milicsiga caleemaha qallalan ee dhaqanka ayaa kor u qaadaya dheef-shiid kiimikaad, taas oo la xiriirta isticmaalka kuwa doonaya in ay qayb ka qaataan kuwa kale ee dheeraadka ah. Intaa waxaa dheer, halabuurka noocan oo kale ah waa lagama-maarmaan, haddii ay lagama maarmaan tahay in la nadiifiyo beerka, kelyaha, hagaajiyo caloosha, dejinta wareegga caadada, hoos u dhig cadaadiska dhiigga.
Waa muhiim! Inta lagu jiro cilmi baarista, waxaa la ogaaday in sifooyinka daaweynta dhirta waxaa lagu sharaxay joogitaanka myristicin iyo apiol ee ka kooban. Walxahani waxay kiciyaan muruqyada siman ee xiidmaha, ilma-galeenka iyo kaadi-haystaha, waxayna sidoo kale gacan ka geystaan ​​kordhinta diurida.
Marka la eego, sifooyinka wanaagsan ee dhirta loogu talagalay haweenka waa tan decoction ee caleemo loo isticmaalo dhiig-raacidda iyo caadada caadada.
Waa maxay sababta cunta rooti dhir ufta loo isticmaalo?
Haddii aad xiiseyneyso su'aasha ah: "Sidee xidid dhir leh oo loogu talagalay haweenka?", Markaa marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaatid asalka ah nooca gaarka ah ee loo isticmaalo kiniinkan. Waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn xidid dhir ah, maadaama noocyada caleenta ay leeyihiin xidid aad u yar, tani waxay hoos u dhigeysaa qiimaha wax ku oolka ah.
Isticmaal xidid dhir ah waxaa lagu muujiyey xaaladaha soo socda:
iyadoo hoos u dhac ku ah difaaca jirka ee bukaanka daran ama kuwa jirrooyinka faafa qaba;
ku xadgudubka beerka iyo miyir la'aanta;
xoqidda jeermiska afka ee leh dhiigbax kordhaya cirridka, gingivitis, qumanka iyo xayawaanka;
iyada oo calooshu ay keento xiidmaha;
si loo hagaajiyo nidaamka dheef-shiidka, kicinta wax soo saarka cuntada enzymes iyo gastritis;
sonkorowga si loo yareeyo heerarka sonkorta dhiigga;
si loo dedejiyo hababka dheef-shiid kiimikaad ee cayilka;
loogu talagalay nidaaminta habdhiska indhaha.
Ma taqaanaa? Daaweynta, waxaad isticmaali kartaa xididada dhirta cusub iyo qalajinta dhirta. Diyaarinta qaybtan sida alaabta ceeriin ee daawada ah waa inay dhacdaa xilliga dayrta, tan iyo xilligaan geedka waxaa la joogaa waqtigii loo ururin lahaa qadar nafaqo badan, nafaqo iyo fitamiino.
Intaa waxaa dheer, asalka dhaqanka waxaa loo isticmaalaa nafaqo nafaqo oo qiimo leh oo si weyn u hagaajin kara dhadhanka aromatic ee xitaa saxamada caadiga ah.
Sidee dhir u yahay ragga iyo haweenka?
Waxaan u maleynayaa, ka dib warbixinta kor ku xusan, ma lahaan kartid su'aasha ah "Mashuurtu ma waxtar leh?". Kaliya sawir, caleemaha cagaaran waxaa ka jira calcium ka badan inta lagu jiro galaas caano ah, iyo decoction ah xididada dhirta ayaa si dhakhso ah u nadiifin kara wejiga dhalinyarada ee finanka nacaybka iyo pigmentation.
Dhir ahaan, dabcan, wuxuu leeyahay tiro ka mid ah guryaha waxtarka leh, in kasta oo khilaafka (oo ay ku jiraan dumarka) ay noqon karaan kuwo kala duwan. Sidaa daraadeed, si habboon u isticmaalkaas oo aan waxyeello u geysan jidhkaaga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato wixii cuduro ah ee aad geyn kartid warshad, iyo xaaladaha ay ka wanaagsan tahay inaadan fiiro gaarin.
Dhirta waxaa ku jira xaddi aad u fiican oo bir ah, magnesium, potassium iyo calcium, taas oo ay sabab u tahay saameyn la taaban karo oo ku kacaya xubnaha jidhka dhiigga iyo nidaamka wadnaha iyo xididdada.
Dumarka, faa'iidada ugu weyn ee dhir ah waa in la qaato si joogto ah oo maraq ah, socodka bishiiba waa xanuun yar oo si dhakhso ah u dhaafaa, noqdaa mid joogto ah. Gaar ahaan faa'iido leh waa dhir for hooyooyinka kalkaalinta, maadaama ay si fiican u kicinayaan wax soo saarka caanaha.
Waa muhiim! Inkastoo dhammaan guryaha la yaabka leh, ay u wanaagsan tahay haweenka uurka leh inay xaddidaan isticmaalka warshadkan faa'iido leh, maaddaama ay kicineyso muruqyada ilmo-galeenka, taas oo keeni karta diidmada uur-kujirka.
Waqtiyadii hore, dhir ayaa loo tixgeliyaa uur qaadid aad u fiican, waxaana la aaminsan yahay in haddii ay jirto qadar weyn oo dhir ah markay qado, kadibna hubaal way ka hortagi doonaan uurka.
Wax yar waxtar ma leh isticmaalka dhir iyo dadka, maaddaama ay soo dhaweyntu kicineyso kororka dhaqdhaqaaqa galmada. Cunista qadar badan oo cagaaran ama juus ah, waxaad si sahlan u gaari kartaa awood korodh.
Waxaa la rumeysan yahay in haddii aad cunayso 100 garaam oo ah daroogada cagaaran ka hor inta aan la galmoonin galmada, markaa raaxada galmada nin ayaa ka muuqan doona dhinaca ugu fiican. Cilmi-baaris ku samaysay in dhirta ay kicineyso hawsha erectile saddex saacadood ka dib isticmaalka.
Ma taqaanaa? Saameynta wanaagsan ee dhirta ku jirta xoogga labka waxay sabab u tahay saameynteeda kicinta ee qanjidhada adrenal, oo soo saarta testosterone - hormoonka masuulka ka ah fursadaha galmada ragga.
Intaa waxaa dheer, dhirku wuxuu saameyn ku yeelanayaa nidaamka wareegga dhiigga, wuxuu kiciyaa qanjirka thyroid wuxuuna xakameynayaa wax soo saarka labka dheddig-lab ah ee hormoonka haweenka - estrogen.
Sida loo isticmaalo dhir
Dhirku waa warshad gaar ah, maadaama loo isticmaalo noocyo kala duwan oo daaweyn ah oo loogu talagalay daaweynta cuduro badan. Gaar ahaan, waxaa loo diyaariyey Juice macaan, taas oo kordhinaysa qummanaanta muuqaalka, yaraynaysa bararka iyo hagaajinta awoodda.
Cagaaraheeda waa in lagu daraa maraqa, saladhyada iyo suxuunta waaweyn. Dhirta waxaa loo diyaariyaa maqaarka quruxda badan ee maqaarka wajiga iyo timaha. Wixii diyaarinta daawooyinka isticmaalaya xididka, abuurka iyo caleemaha warshadda ee foomka cusub ama qallalan.
Isticmaalka fusaha dhirta
Halka dhir fududahay inaad kariso. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaato laba qaado oo ah caleemaha la jajabiyey ee geedka iyo ku shub hal galaas oo biyo karkaraya, ka dib markii weelku xiran yahay iyo halbeegga loo oggol yahay inuu ku buufiyo 10 daqiiqadood. Markaas faleebo waa la sifeeyaa oo la qaataa 30 daqiiqo cuntada ka hor 3 jeer maalintii, muddo 30 maalmood ah.
Faafinta dhir, faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka ay ku jiraan qarsoodiga kiimikada, ayaa loo tixgelinayaa in ay tahay daaweyn aad u fiican oo loogu talagalay cudurro badan oo hortaagan kuwaas oo diyaarinta daawada dhaqameedku aysan awood lahayn.
Sidaas awgeed, waxay ka caawineysaa in laga takhaluso miisaanka xad-dhaafka ah, ka dhigaya nadiifinta maqaarka, nadiifinta beerka sunta, waxay hagaajinaysaa dabeecadda, xoojisaa cirridka iyo neefta cusub.
Faleebo dhir leh ayaa leh sifooyin qurxoon oo aad u fiican, kaas oo uga mahadceliya dheecaanka xad-dhaafka ah ee jidhka, wuxuu yareeyaa casaan, barar, cuncun iyo xanuunka. Isticmaalkiisa joogtada ah ayaa kaa caawin doona in lagu daaweeyo gastritis iyo boog-galka.
Qodobo waxtar leh oo maraq ah
Ku samee decoction waxaad u baahan tahay inaad qaadato 100 garaam oo caleemo qallalan oo la jarjaray, ku shub 1 litir oo biyo ah karkaraya oo karkari 15 daqiiqo biyo qubeys, ka dibna u diyaari 45 daqiiqo. Taas ka dib, maraq waa in la miiro oo qaado 0.5 koob oo 3 ama 4 jeer maalintii. Koorsada ogolaanshaha waa 1-2 bilood.
Maraq dhir Dareemida dareenka gaajada, waxay caadi u tahay wareegga caadada, waxay ka caawisaa in ay ka hortagto caabuqa indhaha, waxay hagaajisaa isbedelka mindhicirka iyo dheefshiidka. Decoction parsley waxaa loo isticmaalaa qaniinyada, qaniinyada cayayaanka iyo jirridaha.
Waxaa loo tixgeliyaa wakiilka antiparasitiga ee wanaagsan, waxaana sidoo kale laftiisa lagu xaqiijiyey daaweynta cudurrada kaadimareenka, urolithiasis, dermatitis iyo cudur beerka.
Sida loo qaato casiir khudradda
Casiirka khudradda wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaqa nafleyda sare, taas oo markaa loo isticmaalayo waa lagama maarmaan in si adag loo ilaaliyo qiyaasta. Qaadashada hal mar waa inaysan ka badneyn 50 garaam.
Si loo kordhiyo awoodda daaweynta, isticmaalka isku-dhafka casiir khudradda leh casiirka cayayaanka kale, khudradda ama miraha waa la oggol yahay. Khudradda cawska leh ee casiirka isbinaajka, dabacasaha, salaarada iyo celery waxay bixiyaan saamayn daweyn oo wanaagsan.
Casiirka cusub ee nukliyeerka ah ayaa kor u qaadaya shaqeynta qanjidhada qanjirada iyo qanjidhada adrenal, si taxadar leh u nadiifiya marinnada dhiigga, waxay kordhiyaan ulastooda waxayna ka hortagaan xinjirowga.
Intaa waxaa dheer in wax kasta oo kale, sababtoo ah content ee cajiib ah ee antioxidants, juice cagaaran ayaa leh saameyn carcinogenic ah, iyo isticmaalka joogtada ah ayaa ka caawin kara ka hortagga qalliinka ee dhismaha dhagxaanta ee kaadiheystu kaadiheysta ama kaadida.
Soodhaha geedka waxaa lagu tilmaamaa cataract, lakariga ardayda iyo xanuunka faafka. Haddii ay dhacdo in lagu dhejiyo, waxaa lagula talinayaa inaad qaadato 1 qaado oo 3 jeer maalintii.
Dhir: sida loo diyaariyo alaabta ceeriin ee caafimaadka
Inkasta oo muuqaalka muuqaalkeedu yahay, marka la eego xeerarka hoose, dhir ayaa la keydin karaa waqti dheer. Ka dib markaad si taxadar leh u maydho caleemaha, ku rid shukumaan iyo u qalaji. Tallaabada xigta, geedka waa dhul.
Guud ahaan, waxaa jira dhowr siyaabood oo muhiim u ah kaydinta dhaqanka. Habka ugu horreeya, waxaad u baahan doontaa inaad dhirtii ku ridato weel nadiif ah oo si deeqsinimo leh ugu daadiso lakab kasta oo cusbo ah.
Habka labaad ayaa xitaa ka fudud sida ugu horeeya: Dhirta la jarjaray, waxaad u baahan tahay inaad ku shubto bacda oo ku rid barafeeyaha.
Habka seddexaad waa kan ugu fudud. Greens si fudud loo qalajiyey oo loo rogay weel kusaabsan dabool adag.
Mararka qaar waxaan lacag ku bixinnaa daroogo qaali ah, iyadoo aan si adag u dhicin in bogsashada ay tahay mid aad u dhow oo aan qaali ahayn. Dhamaan waxaad u baahan tahay kaliya soo qaado bacriminta daawada beerta ka dibna cun cun cusub, ama samee decoction daawo.